Tigreega oo Gantaalo ku dhuftay Bahardar wararkii u danbeeyay ee dagaalka | Berberanews.com
Home WARARKA Tigreega oo Gantaalo ku dhuftay Bahardar wararkii u danbeeyay ee dagaalka
Tigreega oo Gantaalo ku dhuftay Bahardar wararkii u danbeeyay ee dagaalka
Tigree-(Berberanews)-Ciidamada Itoobiya ayaa labo magaalo kala wareegay xoogaga kacdoonka ee waqooyiga gobolka Tigrey, sida ay sheegtay dowlada, iyadoo dagaalku uu kusii xoogeysanayo dagaalka labada todobaad soconaya kaasoo sababay gurmad bina-aadamnimo oo sii kordheysa.
Bayaan ay soo saartay dowladda ayaa lagu sheegay jimcihii in ciidamada Itoobiya ay la wareegeen magaalooyinka Axum iyo Adwa.
Dawladdu waxay sheegtay in ciidamadeedu ay hadda kusii siqayaan magaalada Adigrat, oo qiyaastii 120km (75 mayl) waqooyiga ka xigta Mekelle – magaalo madaxda gobolka Tigray oo ay ku nool yihiin qiyaastii nus milyan qof.
“Dagaalyahano badan oo katirsan taliska ayaa isdhiibay,” ayaa lagu yidhi bayaanka, iyada oo loola jeedo kooxda TPLF.
Waxaan macquul aheyn in la xaqiijiyo sheegashooyinka dhinac walba maxaa yeelay khadadka taleefanka iyo khadka internetka ee ku yaala Tigreega ayaa la jaray tan iyo markii ay colaadu bilaabatay.
Dhinaca kale, khudbad telefishanka laga sii daayey Jimcihii, af-hayeenka madaxweynaha Tigray, Getachew Reda, ayaa sheegay in dagaalyahannadoodu ay “khasaare sii kordhaya” ka geysteen Raya, koonfurta Mekelle.
Dagaalyahanada Tigreega ayaa sidoo kale “ka baabi’iyay xoogagii cadowga” Mehoni ee koonfurta iyo Zalambessa ilaa waqooyi-bari, TV-ga Tigrayan ayaa yidhi.
Reda ayaa sidoo kale sheegatay mas’uuliyadda gantaal saacadihii hore ee Jimcaha lagu garaacay garoonka diyaaradaha ee gobolka deriska la ah.
Gantaalka lagu tuuray Bahir Dar, xarunta gobolka Amxaarada, waxaa ka dhashay walaac laga qabo in isku dhacu u wareego dagaal balaadhan.
Reda wuxyu sheegtay inay ahayd aargudasho duqeymo ay ka soo bilaabeen halkaas. “Waan sii wadi doonnaa beegsiga garoon kasta oo loo isticmaalay in lagu weeraro Tigreega,” ayuu yidhi.
Previous articleHal qof oo ku dhintay qarax lala eegtay Ciidmada Puntland
Next articleYay Itoobiya uga fasax qaadanaysa saldhigyada ciidanka Badda ee Somaliland ka rabto?